Kushambadzira neWhatsApp, kuhwina vatengi nekutumira mameseji | ECommerce nhau
Eva Maria Rodriguez | | Kutengeswa kweIndaneti, Kushambadzira kwenhare
Iko kutumira kukuru kwemeseji mbozha kumakambani kwatova kugona nekuda kwa la WhatsApp kushambadzira, sevhisi yakagadzirirwa kukura kwe B2C mishandirapamwe nemasangano ekushambadzira nemasangano ekushambadzira. Kutenda kune WhatsApp Kushambadzira, makambani anogona kuve nekutaurirana kwakanangana nevanopfuura mamirioni makumi maviri nemashanu vashandisi muSpain uye anopfuura mamirioni mazana mana pasirese.
Nyowani WhatsApp Kushambadzira chikuva inopa mukana mutsva wekutaurirana kumakambani, mazhinji acho anga achitoshandisa WhatsApp kutaurirana nevatengi vavo. WhatsApp Kushambadzira nekudaro inopindura kune chinodiwa uye chinodiwa chiripo mumusika.
Kubvira WhatsApp yakaonekwa muna2009 nenzira yechimurenga yekutumira mameseji kuburikidza nharembozha, kutaurirana hakuchina kufanana. Muchokwadi, parizvino kune vanopfuura mamirioni mazana mana mazana mashanu evashandisi munyika vanoshandisa chishandiso ichi senzira yekutaurirana, ayo angangoita mamirioni makumi maviri ari kuSpain.
Ipuratifomu ya kutumira kushambadza mameseji neWhatsApp Izvo zviri nyore kushandisa, uye zvinongodiwa chete kuendesa dhatabhesi kana iwo mafoni kubva kunhare mbozha uye ugadzire imwe kana akawanda mazita ekutaurirana, nyora meseji, sanganisira mifananidzo kana mapikicha, uzviparadzire kuburikidza neWhatsApp.
1 Unogona kutumira kushambadza paWhatsApp?
2 Ndiani ari kumashure kwekutumwa kwekushambadzira neWhatsApp
3 Sei kushambadza paWhatsApp?
Unogona kutumira kushambadza paWhatsApp?
WhatsApp Kushambadzira kunopa mikana yakawanda kumakambani uye kushambadza nekushambadzira vamiririri, nekuti kubudikidza nenhare mbozha zvinokwanisika kuita, pakati pezvimwe zvinhu, zvinotevera:
Tumira zvinopihwa izvo zvinosanganisirawo mifananidzo, zvinyorwa uye mavhidhiyo
Tungamira sweepstakes, kusanganisira zvinongedzo kumawebhusaiti
Tumira nhau uye zvinogadziridza nezve chimwe chiratidzo
Tumira hutachiona mavhidhiyo, ma audios, nzvimbo kuburikidza neGPS uye geolocation, zvimwe zvemukati zvehutachiona zvinogoverwa nyore nyore neanogamuchira meseji nevavanosangana navo.
Tumira zvemukati zvine zvinongedzo kumapeji akagadziridzwa enhare
Sekuona kwedu, WhatsApp Kushambadzira inosanganisa iyo mikana yekutakura kukuru kwe SMS zvetsika nesimba reapp WhatsApp, iyo inokutendera kuti utumire huwandu hwakawanda hwehuwandu uye ruzivo mune imwechete meseji, zvemukati izvo chero mushandisi anogona kugovana neavo vokutaurirana nekungobatana kune yeWi-Fi network.
Kubatsira kukuru kwe shandisa WhatsApp kutumira kushambadza uchienzaniswa neemail kushambadza ndeyekuti nharembozha dzinobvunzwa kakawanda pazuva, uye zviri nyore kwazvo kuverenga meseji yeWhatsApp pane email pane nhare. Uye zvakare, vashandisi vefoni mbozha vanowanzo nyatsoteerera kune zvese zvinosvika kumagumo avo, kunyanya kana ruzivo rwacho ruchiuya mumufananidzo kana vhidhiyo fomati. Iyi yekupedzisira ficha ndiyo chaiyo yakawedzera kukosha yeWhatsApp kuSMS, uye nei sevhisi iyi yave ichibudirira kudaro.
Ndiani ari kumashure kwekutumwa kwekushambadzira neWhatsApp
SHURE, iyo online yekushambadzira agency inoona nezve ino nyowani system, inotsanangura izvozvo «Kwete chete izvo zvingave zvinokwanisika kusvika kune yakakura nhamba yevanogona vatengi vanoshandisa nharembozha, asiwo neshoko rimwe chete rine mifananidzo kana vhidhiyo vhidhiyo, kubva papuratifomu, ivo vaizosvika ipapo ipapo kuburikidza neye mobile ziviso kune yega yega WhatsApp mushandisi».
Iyo agency inotsanangura kuti yayo nhare mbozha dhatabhesi yakakamurwa nezera, murume kana murume, kuravira kwemunhu, nzvimbo yekugara, mari yegore uye kunyangwe vakatenga na Internet. Nezvo izvo zvinonyanya kushanda kuwedzera mwero we kutendeuka, mune chero chiito chinomuka. «Vashandisi vanopedzisira vave kufarira kuwana chigadzirwa kana sevhisi iri mubvunzo. Chinhu chakazivikanwa nemhando dzakadai sePringles neToyota dzakatoita, uye icho chave chiri kubudirira kukuru.
Sei kushambadza paWhatsApp?
Kubva nhasi, mishandirapamwe yekushambadzira inogona kubvumidzwa neWhatsApp kubva ku € 0.026 pamessage yemapakeji ezve zviuru zvishanu zvakatumirwa. Mutengo weshoko unodzikira sezvo huwandu hwemeseji mupakeji hunowedzera.
Dzvanya pane iyi link kuti uwane rumwe ruzivo nezve sei kutumira kushambadza paWhatsApp
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Kushambadza neWhatsApp, kushambadzira kuburikidza nemeseji mutengi
Ini ndinofunga doublecheck iri nani
Chenjera nekambani yeWhatsApp Kushambadzira, vanokubhadharisa sevhisi yavasinga vape, vakatomhurwa nevashandisi vakasiyana seCAMP pamberi peVashandi veVanhu uye maMalaga Courts, ndinozvitaura neingi zvakanaka sezvo isu tinawo kunyengerwa ndokumhan'ara kukambani uye maneja wayo uye muridzi wega Mr. Gonzalo, uyo akambokupomera uye zvikasashanda anokuudza kuti vamudzinga mukambani
Mhoroi, kuOffice tiri kushandisa chishandiso chakanakisa kutumira mameseji, odhiyo, mifananidzo uye vhidhiyo mameseji kuburikidza neWhatsApp. Inodaidzwa kuti Whappend uye takave nemhedzisiro yakanaka.
zita rangu ndinonzi Antonio. Ndine kambani ine dhatabhesi yevatengi, kwandinayo nhamba dzenhare uyezve mamwe maitiro anoita kuti zvikwanisike kuti nditungamire zvimwe zvinopihwa zvebasa rangu uye zvimwewo kune vamwe, uye zano rangu ndere kuita mapoka akasiyana esaps uye ndivatumire izvo zvinopihwa.
Asi poindi ndeyekuti kuzviita kubva parunhare ndinoona kuti zvinonetesa uye zvinodya nguva, uye izvo zvandinoda kugona kusarudza boka revatengi veX kubva pakombuta yangu uye database, uye uvatumire iwo wakakura meseji. Asi izvi zvinogona kuitwa kubva pakombuta uye zvakanaka.
Unoziva here kana paine chikumbiro cheichi chinokwanisa kutumira SMS kubva kukombuta yangu kutora iyo data kubva kunhamba yefoni yedhatabhesi yandinayo pakombuta yangu?
Ini ndakaisa server mune linux, pane dhimoni rekuziva iyo BAM (Broadband Internet), uye ini ndaisa apache neMySQL, neizvozvo iwe une webhu server, kuburikidza ne php iwe unogona kugamuchira zvikumbiro zvakadaro, uye nekodhi kadiki, iyo sms dhimoni inonzwisisa meseji uye inotumira, zviri nyore, kana iwe uchida kutumira ne php ruzivo iwe unofanirwa kuverenga iyo mysql info uye wotumira iyo sms, chokwadi hachina kuoma uye chinonakidza kwazvo pamwe nekushanda
Elaine basanta akadaro
Mangwanani akanaka, Tine mameseji anotumira mameseji sms, uye isu tinofarira kuzviita zvakare kuburikidza neWhatsApp, zvinoita here kuti titenge nzira yekuendesa? Tinogara kuMaracaibo. Vhenezwera
Pindura kuna Elaine Basanta
Mangwanani akanaka, kuMexico kune kambani yakafanana inoshandisa Hotspot kushambadzira kwakawanda, nemaantena ayo vanoziva zvakawanda nezvevatengi uye vanogara vachikurukura navo. Inodaidzwa kuti Hostpot Mexico, uye zvinonakidza mashandisiro avanoshandisa hotspot kubhizinesi.